Tammy Abraham oo laga saaray shaxda Kooxda Chelsea ee caawa afar dhammaadka FA Cup-ka la ciyaaraya Manchester City – Gool FM
(London) 17 Abriil 2021. Tammy Abraham ayaa laga saaray shaxda Kooxda Chelsea ee caawa la ciyaaraya Manchester City afar dhammaadka FA Cup-ka.
Mustaqbalka Weeraryahankan Tammy Abraham ayaa shaki hareeyey mustaqbalkiisa kooxda kaddib markii sida la sheegay laga saaray safka Chelsea ee caawa afar dhammaadka FA Cup-ka ku wajahaya Naadiga Manchester City.
Xiddiga xulka qaranka England ayaa ah gooldhaliyaha ugu sarreeya tartanka xilli ciyaareedkan, isagoo dhaliyey afar gool, laakiin lama filayo inuu ku lug yeesho kulanka caawa ka dhacaya garoonka Wembley.
Abraham ayaa si buuxda taam u ah, waxaana la sheegay inuu si fiican u tababartay tan iyo markii uu ka soo kabsaday dhaawac canqawga ah oo soo gaaray.
Laakiin, ka maqnaanshihiisa kooxda Blues ee maanta ayaa sii caddaynaysa inuu mugdi galay mustaqbalkiisa mudada dheer ee ka hoos ciyaaridda tababare Thomas Tuchel, kaasoo in yar adeegsaday tan iyo markii uu yimid oo uu shaqada Chelsea ka beddelay Macallin Frank Lampard bishii Janaayo.
Abraham ayaa wali ah gooldhaliyaha ugu sarreeya kooxda xilli ciyaareedkan, isagoo leh 12 gool, inkastoo xaqiiqdu ay tahay inuu hoos uga dhacay xulashada tababaraha reer Jarmal.
Si kastaba ha noqotee, rabitaan la’aanta Tuchel ee ah inuu adeegsado Abraham ayaa shaki weyn gelinaysa mustaqbalkiisa, waxaana si cad u sii kordhaya in kooxdu ay dhageysan karto dalabyada lagu doonayo xiddigan ka soo baxay akadeemiyadooda ka hor xilli ciyaareedka soo socda.
23-sano jirkaan ayaa 18 gool u dhaliyey kooxda Chelsea xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, waxaana uu u qalmay inuu xilli ciyaareedkan si joogto ah ugu soo bilowdo safka hore ee kooxda, laakiin qaab ciyaareedkiisa ayaan qancin tababare Thomas Tuchel.
Horudhac: Athletic Bilbao vs Barcelona... (Kooxaha ugu hanashada badan taariikhda Copa del Rey oo caawa ku kulamaya final-ka tartankan)
Koox ka dheesha horyaalka Premier League oo heshiis shan sanadood ah hordhigaysa Ibrahima Konate... (Miyuu daafacan u soo dhaqaaqi doonaa Ingiriiska?)